Latvia inorambidza kuratidzwa kweruzhinji kwe'Z' uye 'V' inomiririra hutsinye hweRussia
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Rativhiya » Latvia inorambidza kuratidzwa kweruzhinji kwe'Z' uye 'V' inomiririra hutsinye hweRussia
Mushure mekunge hurumende yeUkraine yadaidzira kuongororwa kwezviratidzo 'Z' uye 'V' zvakashandiswa neRussia kuratidzira hondo yemhirizhonga irikuenderera mberi muUkraine, Latvia - yaimbova Soviet republic, zvino yava nhengo yeEU neNATO, yakadzika mutemo mutsva unorambidza mhirizhonga. kuratidzwa pachena kwemavara 'Z' uye 'V'.
Mutemo mutsva wakagamuchirwa neparamende yeLatvia unoti zviratidzo 'Z' uye 'V' zvinoshandiswa nemauto eRussia mu Ukireni vari kukudza utsinye uye mhosva dzehondo dzava kuwedzerwa kuzviratidzo zvakarambidzwa zviri pamutemo zvinorumbidza hutongi hweNazi kana hweKomonisiti.
Paramende yeLatvia yakashandisa nzira yechimbichimbi yekuvhota pagadziridzo dzinorambidza kuratidzwa kwechisimba chemauto uye zviratidzo zvemhosva dzehondo pazviitiko zveveruzhinji.
Mutemo unotiwo hapana mvumo yezviitiko zveveruzhinji ichapihwa kana ikabatwa mukati me200 metres yezviyeuchidzo 'kurangarira' mauto eSoviet ayo achiri Rativhiya. Vanhu vanobatwa nemhosva pasi pemutemo mutsva vachabhadhariswa faindi inosvika mazana mana emadhora, ukuwo makambani achipihwa faindi inosvika zviuru zvitatu nemazana maviri emadhora.
"Mukushoropodza kurwisana kweRussia muUkraine, tinofanira kumira zvakasimba kuti zviratidzo zvinorumbidza kurwisa kwemauto eRussia, zvakadai semabhii 'Z', 'V' kana zvimwe zviratidzo zvinoshandiswa kuita zvakadaro, hazvina nzvimbo muzviitiko zvevanhu," Artuss. Kaimins, sachigaro weSaeima's Human Rights and Public Affairs Commission, vakadaro mukutaura.
Nyika dzinoverengeka dzeGerman dzakatotaura kuti dzichabhadharisa vanhu kuratidzwa kwechiratidzo. Muvakidzani weLatvia, Lithuania, ari kufungawo kurambidzwa kweZ, pamwe chete nerabhoni yakasviba-uye-orange St. George's ribhoni, yakashandiswa nyika yeRussia.
Mavara echiRussian, ayo anoshandisa Cyrillic, haana kana 'V' kana 'Z' mairi. Zvose zviratidzo zvakashandiswa kumaka mota dzeRussia dziri kutora chikamu muhondo yeRussia yehutsinye yakanangana namambo weUkraine mumwedzi wapfuura.